Students writeasimple essay
Eassy & Letter
နေပြည်တော်ရှိ SCIBN Campus တွင် Level (3) Diploma in Business and Management သင်တန်းကို သြဂုတ် (၂၈) ရက်တွင် စတင်ဖွင့်လှစ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက် တက်ရောက်လိုသူတွေအနေနဲ့ စာရင်းပေးသွင်းနိုင်မယ်လို့ သိရပါသည်။ သင်တန်းသား/သူ ဦးရေ (၂၀) ကိုသာ လက်ခံမှာဖြစ်ပြီး သင်တန်းကာလ (၉)လ ကြာမြင့်မှာဖြစ်တယ်လို့ သိရပါသည်။ ကျောင်းအိပ်ကျောင်းစား ပညာသင်စနစ်၊ (၂၄) နာရီမြန်နှုန်းမြင့် အင်တာနက်၊ စာကြည့်တိုက်ဝန်ဆောင်မှု၊ လစဉ်ပညာရေးနှင့် ပတ်သက်သော ဟောပြောပွဲများ၊ ပညာရေး၊ လုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်မှုနှင့် ပတ်သက်သော လေ့လာရေးခရီးစဉ်များ၊ ပညာရေးနှင့် ပတ်သက်သော နိုင်ငံခြားလေ့လာရေး ခရီးအခွင့်အလမ်းများ၊ အိုင်တီနှင့် ပတ်သက်သော ကျွမ်းကျင်သင်ကြားမှု၊ ဘာသာစကားကျွမ်းကျင်အောင် သင်ကြားခြင်း (အင်္ဂလိပ်စာ)၊ လူမှုဆက်ဆံရေးနှင့် သက်ဆိုင်သော ကျွမ်းကျင်သင်ကြားမှုများအပြင် အလုပ်အတွေ့အကြုံရရှိရန် ရန်ကုန်ရှိ နိုင်ငံတကာကုမ္ပဏီခွဲတွေမှာ Internship နဲ့ အလုပ်အကိုင်ရရှိရန် ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ပေးခြင်းတို့ ပါဝင်မယ်လို့သိရပါသည်။ Read More:>>> အစိုးရနည်းပညာအထက်တန်းကျောင်းများတွင် ကာလတိုသင်တန်းများဖွင့်လှစ်မည် သင်ကြားပေးမယ့် ဘာသာရပ်တွေကတော့ Managing Business Operation, Maximizing, Resources, The Business Environment, Managing People in Organization, Working in Teams, Effective Business Communication စတာတွေဖြစ်ပြီး အသေးစိတ်ကို SCIBN (နေပြည်တော်) Campus 09899830500 နှင့် 09899830600 ကို ဆက်သွယ်မေးမြန်းစုံစမ်းနိုင်ပါသည်။ Source: Internet
Monday, 19 August 2019 12:11
သတင်းအချက်အလက်နှင့် ဆက်သွယ်ရေးနည်းပညာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် မြန်မာနိုင်ငံကွန်ပျူတာအသင်းချုပ်ရဲ့ ဦးဆောင်မှုနှင့် မြန်မာနိုင်ငံကွန်ပျူတာပညာရှင်အသင်းမှ ကြီးမှူးကျင်းပလျက်ရှိသည့် Information Technology Professionals Examination Council (ITPEC) အသိအမှတ်ပြု စာမေးပွဲတွေကို အောက်တိုဘာ (၂၇) ရက်မှာ ကျင်းပမည်ဟု သိရပါသည်။ Information Technology Passport Examination (IT Passport) စာမေးပွဲမှာ အိုင်တီဆိုင်ရာ အခြေခံဗဟုသုတရှိပြီး အိုင်တီနဲ့ ပတ်သက်တဲ့လုပ်ငန်းများမှာ တာဝန်ထမ်းဆောင်နေသူတွေအတွက်လည်းကောင်း၊ Fundamental Information Technology Engineer Examination (FE) စာမေးပွဲမှာ အိုင်တီဆိုင်ရာဗဟုသုတ အခြေခံကျွမ်းကျင်မှုရှိပြီးသူတွေ၊ Programmer တွေ၊ Program Design ရေးဆွဲသူတွေနှင့် Software Development လုပ်ငန်းတွေကို လုပ်ကိုင်နေသူတွေအတွက်လည်းကောင်း၊ Applied Information Technology Engineer Examination (AP) စာမေးပွဲအနေဖြင့် အိုင်တီဗဟုသုတတွေနှင့် ကျွမ်းကျင်မှုတွေကို လက်တွေ့နယ်ပယ်မှာ အသုံးချနိုင်စွမ်း (Apply) ရှိသူတွေ၊ အဆင့်မြင့် အိုင်တီလူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းပြုလို၏ သူတွေ အတွက်လည်းကောင်း အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းအတွက် ကျွမ်းကျင်မှုအသိအမှတ်ပြုအောင် လက်မှတ်ရရှိစေမယ့် စာမေးပွဲအသီးသီးဖြစ်တယ်ဟု သိရပါသည်။ စာမေးပွဲကြေးအနေဖြင့် IT Passport အတွက် (၂ သောင်း)ကျပ်၊ FE အတွက် (၃ သောင်း)ကျပ်၊ AP အတွက် (၅ သောင်း)ကျပ် ပေးသွင်းရမည်ဖြစ်ပါသည်။ IT Passport စာမေးပွဲကို အောက်တိုဘာ (၂၇) ရက်၊ နံနက် (၉း၃၀) မှ (၁၁း၃၀)အထိလည်းကောင်း၊ FE စာမေးပွဲကို အောက်တိုဘာ (၂၇)ရက်၊ နံနက် (၉း၃၀)မှ နေ့လည် (၁၂) နာရီအထိနှင့် နေ့လည် (၁း၃၀)မှ (၄) နာရီအထိ ကျင်းပပေးသွားမှာဖြစ်ပါသည်။ စာမေးပွဲတွေကို ပြည်ထောင်စု စာရင်းစာချုပ်ရုံး (သခင်မြပန်းခြံအနီး) မှာကျင်းပပြုလုပ်သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။ Read More:>>>> ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်တွင် ဂျပန်၊ အင်္ဂလိပ်စာ နှင့် ကွန်ပျူတာ ပညာရပ်များအား အခမဲ့သင်ကြားနိုင်ပြီ ဖြေဆိုလိုသူတွေအနေဖြင့် အောက်တိုဘာ (၂၂) ရက်နောက်ဆုံးထားစာရင်းပေးသွင်းနိုင်ပြီး MCPA အသင်းဝင်တွေအနေဖြင့် (၅၀%) သက်သာခွင့် ရရှိမည်ဖြစ်ပါသည်။ အသေးစိတ်သိရှိလိုသူများအနေဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံကွန်ပျူတာအသင်းချုပ် (MCF)၊ ဖုန်း-၆၅၂၃၀၇၊ ၀၁-၂၃၀၅၂၃၃ နှင့် MCPA ဖုန်းနံပါတ် ၆၅၂၂၇၆၊ ၀၉-၅၀၆၇၁၆၈ ကိုဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။ Source: Internet
Held by the leadership of the Federation of , ITPEC tests
နေပြည်တော်၊ ရန်ကုန် (ရွာမ)နှင့် မန္တလေးမြို့ရှိ အစိုးရနည်းပညာအထက်တန်းကျောင်းများမှာ ကျွမ်းကျင်မှုအခြေပြုကာလတိုသင်တန်းတွေ ဖွင့်လှစ်မည်လို့ သိရပါသည်။ သင်တန်းတွေကို စက်တင်ဘာ (၂) ရက်မှာစတင်ဖွင့်လှစ်မည်ဖြစ်ပြီး အစိုးရနည်းပညာအထက်တန်းကျောင်း (နေပြည်တော်)မှာ အုတ်စီကျွမ်းကျင်သင်တန်းနဲ့ သံချည်သံကွေးကျွမ်းကျင်သင်တန်းလည်းကောင်း၊ အစိုးရနည်းပညာအထက်တန်းကျောင်း (ရွာမ)မှာ ပုံဆင်၊ ပုံရိုက်ကျွမ်းကျင်သင်တန်းနှင့် လမ်းခင်းကျွမ်းကျင်သင်တန်းကိုလည်းကောင်း၊ အစိုးရနည်းပညာအထက်တန်းကျောင်း (မန္တလေး)မှာ သံချည်သံကွေးကျွမ်းကျင်သင်တန်းကိုလည်းကောင်း ဖွင့်လှစ်ပေးသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။ သင်တန်းကို မူလတန်းအောင်မြင်ပြီး အသက် (၁၈)နှစ်ပြည့်ပြီး အသက် (၄၀) ထက်မကျော်လွန်သူတွေ တက်ရောက်နိုင်ပါသည်။ လျှောက်လွှာတွေကို သြဂုတ် (၁၆)ရက်မှ စက်တင်ဘာ (၁) ရက်အထိသက်ဆိုင်ရာကျောင်းအသီးသီးမှာ ရယူလျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ Read More:>>>>> ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်တွင် ဂျပန်၊ အင်္ဂလိပ်စာ နှင့် ကွန်ပျူတာ ပညာရပ်များအား အခမဲ့သင်ကြားနိုင်ပြီ သင်တန်းကြေးမှာအခမဲ့ဖြစ်ပြီး သင်တန်းသို့ ကျား/မ မရွေးတက်ရောက်နိုင်ပါသည်။ လျှောက်လွှာများကို www.mimu.info နှင့် https://bit.ly/2A3xiak မှာရယူနိုင်ပြီး eye.cbmsc@gmail.com သို့လည်းပေးပို့လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ အသေးစိတ်ကို အစိုးရနည်းပညာအထက်တန်း (နေပြည်တော်) ဖုန်း ၀၉-၄၄၈၅၃၆၂၀၀၊ ၀၆၇-၄၀၁၄၂၅ ၆၊ အစိုးရနည်းပညာအထက်တန်းကျောင်း (ရွာမ) ဖုန်း ၀၉၂၅၀၃၇၇၁၈၈၊ ၀၁-၆၄၁၆၉၆၊ အစိုးရနည်းပညာအထက်တန်းကျောင်း (မန္တလေး) ဖုန်း ၀၉-၇၉၁၃၇၁၂၇၄၊ ၀၂-၅၁၅၂၁၉၂ ကိုဆက်သွယ်မေးမြန်းစုံစမ်းနိုင်ပါသည်။ Source: Internet
Government Technical High School to open in the short courses
open in the short courses
Sunday, 18 August 2019 15:44
ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ဝင်းတွင် ဂျပန်၊ အင်္ဂလိပ်စာ နှင့် ကွန်ပျူတာ ပညာရပ်များအား အခမဲ့သင်ကြားနိုင်ပြီ ဖြစ်ကြောင်း သတင်း ရရှိသည်။
Sunday, 18 August 2019 10:38
Global English Course သင်တန်းသားလျှောက်လွှာခေါ်ယူခြင်း
၂၀၁၉-၂၀၂၀ ပညာသင်နှစ် ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်သို့ တက်ရောက်ရန် ဝင်ခွင့်လျှောက်ထားသူများသည် ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်၏ (ဒုတိယအကြိမ်) လူတွေ့စစ်ဆေးခြင်းကို (၂၀-၈-၂၀၁၉) ရက်နေ့နှင့် (၂၁-၈-၂၀၁၉) ရက်နေ့နံနက် (၁၀း၀၀) နာရီတွင် ပြုလုပ်မည်ဖြစ်ပါသဖြင့် သက်ဆိုင်ရာဘာသာရပ်ဌာနတွင် လူတွေ့ဖြေဆိုကြရမည်ဖြစ်ပါသည်။ Read More:>>>> **ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန၏ ထုတ်ပြန်ချက်အရ ရာထူးတိုးမြှင့်ခြင်းခံရသူများ** Source: University News
Yangon University second Interview
Friday, 16 August 2019 15:15
TokuteiGinou စာမေးပွဲ (ဟိုတယ်လုပ်ငန်းနဲ့ စားသောက်ဆိုင်လုပ်ငန်း) အတွက်ဂျပန်စာ အထူးသင်တန်းများကို အောက်ပါအစီအစဉ်အတိုင်းဖွင့်လှစ်ပါတော့မယ်။တက်ချင်တယ်ဆိုရင် P.K.T Education Center ကိုစာရင်းသွင်းနိုင်ပါသည်။ **အခု သင်တန်းအပ်လို့ရပါပြီ **သင်တန်းကြေးက ကျပ်(၅၀,၀၀၀)ဂျပန်စကားN4 အဆင့်ရှိဖို့လိုအပ်ပါသည်။သင်တန်း တက်ရောက်ရန် (JLPT N4) အောင်လက်မှတ်မရှိလည်းရပါသည်။ကိုယ့်ကိုကိုယ့် (N4)အဆင့် ဂျပန်စာ နားလည်တယ်လို့ ယုံကြည်မူရှိရင် တက်လို့ရပါသည်။ **ဆရာမ ပိုးကြည်သာ ကိုယ်တိုင် သင်ကြားပေးမှာဖြစ်ပါသည်။** လက်ခံမည့် ဦးရေ (၂၅) ယောက်သာ ဖြစ်တဲ့အတွက် အမြန်ဆုံးအပ်နှံထားရန်လိုအပ်ပါသည်။ **ဟိုတယ်လုပ်ငန်း သင်တန်း** - အပတ်စဉ် စနေ ၊ တနင်္ဂနွေ - နေ့လည် ၂နာရီမှ ၄နာရီ - သင်တန်း ကာလ - ၁၀လပိုင်း (၁၂၊၁၃၊၁၉၊၂၀၊၂၆၊၂၇) ရက်များဖြစ်ပါသည်။ **စားသောက်ဆိုင်လုပ်ငန်း သင်တန်း** - အပတ်စဉ် စနေ ၊ တနင်္ဂနွေ - နေ့လည် ၅နာရီမှ ၇နာရီ - သင်တန်း ကာလ - ၁၀လပိုင်း (၁၂၊၁၃၊၁၉၊၂၀၊၂၆၊၂၇) ရက်များဖြစ်ပါသည်။ Read More:>>>**ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန၏ ထုတ်ပြန်ချက်အရ ရာထူးတိုးမြှင့်ခြင်းခံရသူများ** လိပ်စာ : အမှတ်(၇၁)၊ အခန်း(A)၊ ၆လွှာ၊အထက်ပုဇွန်တောင်လမ်း၊ မင်္ဂလာတောင်ညွန့် မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။ ph-09-897485577, 09-251801804 Source:PKT It & Japanese Language Center
The hotel and restaurant industry Japan Special Course
ရန်ကုန်ကွန်ပျူတာ တက္ကသိုလ် Final Year ကျောင်းသား/သူများအတွက် Re-Exam
** English ဘာသာရပ် သောကြာနေ့ နံနက် (၁၀) နာရီမှ (၁၁) နာရီ၊ အခန်းနံပါတ် F-201 ** CST-501 ဘာသာရပ် တနင်္လာနေ့နှင့် သောကြာနေ့ နေ့လည် (၁) နာရီမှ (၂း၁၅)၊ အခန်းနံပါတ် F-201 ** CST-502 ဘာသာရပ် အင်္ဂါနေ့ နံနက် (၁၀) နာရီမှ (၁၁း၃၀)နာရီ၊ အခန်းနံပါတ် F-201,F-202 ** CST-503 ဘာသာရပ် ကြာသမတေးနေ့ နံနက် (၉း၃၀)နာရီမှ (၁၁း၃၀) နာရီ၊ အခန်းနံပါတ် F-201 ** CS-504 ဘာသာရပ် တနင်္လာနေ့နှင့် သောကြာနေ့ နံနက် (၁၀) နာရီမှ (၁၂) နာရီ၊နေ့လည် (၂း၃၀) နာရီမှ (၃း၄၅)နာရီ၊ အခန်းနံပါတ် F-201 ** CS-505 ဘာသာရပ် သောကြာနေ့ (23.8.2019) နံနက် (၉) နာရီမှ (၁၀) နာရီ၊ အခန်းနံပါတ် F-201 Read More:>>>> **ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန၏ ထုတ်ပြန်ချက်အရ ရာထူးတိုးမြှင့်ခြင်းခံရသူများ** Source: Univesity of Computer Studies
Yangon Computer University for Final Year Student / ReExam
for Final Year Student / ReExam
** သင်တန်းကြေးလုံးဝပေးစရာမလိုပဲ UK Professional Diploma သင်တန်းများ ကိုအရေအတွက်အကန့်အသတ်မရှိတက်ရောက်နိုင်မည့်အခွင့်အရေးများ ** MMI Tuition-Fee-Free (TFF) Program Special Member Card (ဘာသင်တန်းတက်တက် သင်တန်းကြေး"အခမဲ့" ရမည့် card) MMI (၃) နှစ်ပြည့်အစီအစဉ်အဖြစ် အထူးအခွင့်အရေးပေးထားတာမို့ ယခုချက်ချင်းဆက်သွယ်လိုက်ပါ။ ** UK Professional Diploma သင်တန်းတစ်ခုတက်ရုံဖြင့်.. ** သင်တန်းကြေးအခမဲ့ဖြင့် UK Diploma အရေအတွက်အကန့်အသတ်မရှိ ရယူခွင့် ** ရန်ကုန်မြို့မှာ အောင်ချက်အကောင်းဆုံး Management ကျောင်းမှာ ဂုဏ်ရှိစွာတက်ရောက်ခွင့် ** ပညာလိုလားသူများအတွက် ဘယ်နေရာမှာမှမရနိုင်တဲ့ အထူးအခွင့်အရေး ဒါတွေကိုရယူပြီး အောက်ပါ UK Professional Diploma တွေကို အရေအတွက်အကန့်အသတ်မရှိ ရွေးချယ်တက်ရောက်နိုင်ပါတယ်။ ** UK Professional Diploma များမှာ** 1. Professional Diploma in Business Management (OTHM, UK) 2. Professional Diploma in Human Resource Management (OTHM, UK) 3. Professional Diploma in Financial Management (OTHM, UK) 4. Professional Diploma in Project Management (OTHM, UK) 5. Professional Diploma in Hotel, Restaurant and Tourism Management (OTHM, UK) 6. Professional Diploma in Leadership (OTHM, UK) 7. Professional Diploma in Business Skills (OTHM, UK) 8. Certified Strategic Manager (IQN, UK) 9. Diploma in Human Resource Management (IQN, UK) 10. Diploma in Marketing (IQN, UK) 11. Diploma in Supply Chain Management (IQN, UK) 12. Diploma in Hospitality Management (IQN, UK) Read More:>>>> “YGNNET ရဲ့အခမဲ့ ကွန်ပျူတာပြုပြင်ထိန်းသိမ်းသင်တန်း" ဆက်သွယ်ရန်ဖုန်းနံပါတ်မှာ ၀၉-၇၇၃၈၈၉၁၂၅၊ ၀၉-၇၉၅၉၀၁၉၅၃၊ ၀၉၄၅၀၀၂၅၆၁၅ တွင်မေးမြန်းစုံစမ်းနိုင်ပါသည်။ ** တက်ရောက်သူ/ စိတ်ဝင်စားသူများပြားသည့် အစီအစဉ်ဖြစ်ပါသဖြင့် ကြိုတင်စာရင်းသွင်းကြပါရန်နှင့် မိမိတက်ရောက်လိုသော သင်တန်းလျှောက်ခွင့်ကို MMI Management Department မှ ဝင်ခွင့်ရ၊ မရ စစ်ပြီးပြန်လည်အကြောင်းကြားသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။** ** အတန်းတစ်တန်းစီတွင်သတ်မှတ်လူဦးရေပြည့်ပါက နောက်ထပ်မံဖွင့်လှစ်သော အတန်းများတွင် တက်ရောက်ခွင့်ရရှိစေရန်စီစဉ်ပေးပါမည်။** လိပ်စာ ။ ။ အမှတ်(15, B-1)၊ ပဒုမ္မာလမ်း၊(St. John City Mall နှင့် ပြည်လမ်းစိန်ဂေဟာအနောက်ဖက်လမ်း)၊ ရန်ကုန်မြို့။ Hotline : ၀၉-၇၉၅၉၀၁၉၅၃ ဖုန်း။ ။၀၉-၇၇၃၈၈၉၁၂၅၊ ၀၉-၄၅၀၀၂၅၆၁၅ Email : info@mmimyanmar.com Source: Myanmar Management Institute
UK Professional Diploma courses for those who want to attendafree
UK Professional Diploma
Friday, 16 August 2019 09:54
**ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန၏ ထုတ်ပြန်ချက်အရ ရာထူးတိုးမြှင့်ခြင်းခံရသူများ**
(၁၃-၈-၂၀၁၉) ရက်နေ့တွင် ကျင်းပပြီးစီးခဲ့သော ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ စီမံခန့်ခွဲရေးကော်မတီ အစည်းအဝေးအမှတ်စဉ် (၁၆/၂၀၁၉) စားပွဲတင်အစီအစဉ်(၁၀) တွင် သဘောတူညီချက်အရ အဆင့်မြင့်ပညာဦးစီးဌာနရှိ တက္ကသိုလ်များမှ အောက်ဖော်ပြပါ ပါမောက္ခ/ ကျောင်းအုပ်ကြီး (လစာနှုန်းကျပ် ၃၇၄၀၀၀- ၄၀၀၀- ၃၉၄၀၀၀) များအား ၄င်းတို့နှင့် ယှဉ်တွဲဖော်ပြပါ တက္ကသိုလ်များတွင် လစ်လပ်လျက်ရှိသော ဒုတိယပါမောက္ခချုပ် (လစာနှုန်း ၄၁၈၀၀၀- ၄၀၀၀- ၄၃၈၀၀၀) ရာထူးသို့ (၁၃-၈-၂၀၁၉) ရက်နေ့မှစ၍ ရာထူးတိုးမြှင့်ခန့်ထားလိုက်ပါသည်။ Read More:>>>> ရန်ကုန်မြို့နှင့်မန္တလေးမြို့တွင်ကျင်းပပြုလုပ်မည့်ဂျပန်ဘာသာအရည်အချင်းစစ်စာမေးပွဲ Source: ပညာရေးဝန်ကြီး
According to the Ministry of Education to promote victims
Minisiry of Education
Friday, 16 August 2019 09:16
-ဒီသင်တန်းမှာတော့ ကွန်ပျူတာကို တစ်စစီပြုတ်တပ်ချင်သူများအတွက် အဓိက သင်တန်းပေးမှာဖြစ်ပါသည်။ -ကွန်ပျူတာရဲ့ အစိတ်အပိုင်းတွေကို လေ့လာရမှာဖြစ်ပါသည်။ သင်ဟာ ကွန်ပျူတာကို အသုံးပြုဖူးသူ Basic Level အောင်မြင်ထားသူ ဖြစ်ဖို့တော့ လိုအပ်ပါသည်။ -သင်မှာသာ ကွန်ပျူတာရှိနေရင် (သို့) ဝယ်ယူဖို့ စဉ်းစားနေရင် ဒီသင်တန်းလေးကို တက်ထားသင့်ပါသည်။ -သင်သည်ကွန်ပျူတာကိုSmart ကျကျလေးသုံးစွဲတတ်လာပါလိမ့်မည်။ -သင်တန်းကိုတက်ပြီးပါက သင်သည် ကွန်ပျူတာတွေကို ပြုပြင်နိုင်သူ၊ တနည်းအားဖြင့် Error တွေကို ဖြေရှင်းနိုင်သူတစ်ယောက် ဖြစ်လာမှာဖြစ်ပါသည်။ -ကွန်ပျူတာအပိုင်းကို အသေးစိတ်သိရှိထားတဲ့အတွက် အလုပ်လျှောက်တဲ့နေရာမှာ သူများထက် သာနေပါလိမ့်မည်။ -သင်တန်းတက်ပြီးလျှင် IT Support, ICT Products Sale, Computer Technician နှင့် IT လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ အလုပ်တွေကို ဝင်ရောက်လုပ်ကိုင်နိုင်မှာဖြစ်ပါသည်။ -သင်တန်းဟာ ကွန်ပျူတာတစ်ခုလုံး၏ အလုပ်လုပ်ပုံနှင့် ဖွဲ့စည်းပုံကို သင်ယူရမှာဖြစ်ပါသည်။ -ကိုယ်တိုင်ကွန်ပျူတာကို လက်တွေ့ တစ်စစီ တစ်ယောက်ချင်းဖြုတ်တပ် လုပ်ရမှာဖြစ်ပါသည်။ -သင်တန်းကြေးပေးစရာမလိုပဲ အခမဲ့တက်ရောက်နိုင်ပါသည်။ မည်သူမဆို တက်ရောက်နိုင်ပါသည်။ -သင်ကြားမှုကို Online Exam Test ဖြင့် ပြန်လည်စစ်ဆေးပြီး အရည်အချင်းပြည့်မှီသူများကို Certificate ထုတ်ပေးမည် ဖြစ်ပါသည်။ -သင်ကြားမှုများကို လေ့လာနိုင်ရန် သင်တန်းကျောင်းမှ ထုတ်ပေးသော Mobile App ကို Install လုပ်ထားပြီး သင်တန်းတက်ပါက ရရှိမည့် Student ID နှင့် Login password တို့ကို အသုံးပြု၍ သင်ခန်းစာများကို ပြန်လည်လေ့လာနိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။ -Certificate, Online Exam Test Registration နှင့် သင်ထောက်ကူစာအုပ်များ အတွက်သာ ၁၇၀၀၀ ကျပ်သာ ပေးသွင်းရမည်ဖြစ်ပါသည်။ -သင်တန်းသားဦးရေ (၁၀၀) သာလက်ခံမည်ဖြစ်ပါသည်။ -သင်ထောက်ကူပစ္စည်းအပြည့်အစုံနှင့် Aircon ခန်းများအတွင်း စနစ်တကျ သင်ယူရမည်ဖြစ်ပါသည်။သင်တန်းပြီးဆုံးသွားတဲ့ သင်တန်းသူ သင်တန်းသားများ၏ စကားသံများကို Page ၏ Review များကြည့်နိုင်ပါသည်။ **သင်တန်းအချိန်ဇယား** တနင်္လာ၊ အင်္ဂါ (တပတ် ၂ ရက်)နံနက် ၁၁ နာရီမှ နေ့လည် ၁ နာရီ (တန်းခွဲ A1)နေ့လည် ၁နာရီမှ ညနေ ၃ နာရီ (တန်းခွဲ A2)ညနေ ၃ နာရီမှ ၅နာရီ (တန်းခွဲ A3)သင်တန်းကာလ -၁ လသင်တန်းစမည့်ရက် - စက်တင်ဘာလ (၉) ရက်နေ့သင်တန်းပြီးဆုံးမည့်ရက် - အောက်တိုဘာလ (၁) ရက်နေ့ ဗုဒ္ဓဟူး၊ ကြာသပတေး (တပတ် ၂ ရက်)နံနက် ၁၁ နာရီမှ နေ့လည် ၁ နာရီ (တန်းခွဲ B1)နေ့လည် ၁နာရီမှ ညနေ ၃ နာရီ (တန်းခွဲ B2)ညနေ ၃ နာရီမှ ၅နာရီ (တန်းခွဲ B3)သင်တန်းကာလ – ၁ လသင်တန်းစမည့်ရက် - စက်တင်ဘာလ (၄) ရက်နေ့သင်တန်းပြီးဆုံးမည့်ရက် - စက်တင်ဘာလ (၂၆) ရက်နေ့ သောကြာ၊ စနေ (တပတ် ၂ ရက်)နံနက် ၁၁ နာရီမှ နေ့လည် ၁ နာရီ (တန်းခွဲ C1)နေ့လည် ၁နာရီမှ ညနေ ၃ နာရီ (တန်းခွဲ C2)ညနေ ၃ နာရီမှ ၅နာရီ (တန်းခွဲ C3)သင်တန်းကာလ – ၁ လသင်တန်းစမည့်ရက် - စက်တင်ဘာလ (၆) ရက်နေ့သင်တန်းပြီးဆုံးမည့်ရက် - စက်တင်ဘာလ (၂၈) ရက်နေ့ **သြဂုတ်လ (၃၀) ရက်အထိတွင် စာရင်းပိတ်ပါမည်။** Read More:>>>>ရန်ကုန်မြို့နှင့်မန္တလေးမြို့တွင်ကျင်းပပြုလုပ်မည့်ဂျပန်ဘာသာအရည်အချင်းစစ်စာမေးပွဲ -သင်တန်းတက်ရောက်လိုသူများကြိုတင်စာရင်းပေးသွင်းရပါမည်။ -သြဂုတ်လ (၁) ရက်နေ့အထိသာ သင်တန်းလက်ခံပါမည်။ -သင်တန်းသားပြည့်သွားသော တန်းခွဲများကို စာရင်းပေးသွင်းလို့ရမည်မဟုတ်သည့်အတွက် အမြန်စာရင်းပေးသွင်းရန် အကြံပြုအပ်ပါသည်။ -သင်တန်းသားဦးရေ ပြည့်သွားပါက စာရင်းပေးသွင်းခြင်းကို ရပ်ဆိုင်းမည်ဖြစ်ပါသည်။ -သင်တန်းအပ်ရန် နေ့စဉ် နံနက် ၁၀ နာရီမှ ညနေ ၅း၀၀ အထိ ပိတ်ရက်မရှိ လက်ခံပေးသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။ -အသေးစိတ်သိလိုပါက ဖုန်း ၀၉-၇၆၈၁၃၃၈၁၁ ကို ရုံးချိန် (၁၀း၃၀ နာရီမှ ၅း၀၀) အတွင်း ဆက်သွယ်မေးမြန်းစုံစမ်းနိုင်ပါသည်။ -သင်တန်းအမည်မှာ YGNNET ဖြစ်ပါသည်။ YGNNET က Software ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်ပြီး Educations ကိုပါတွဲ၍ သင်တန်းပို့ချပေးနေပါသည်။ -IT လောကအတွင်း ခြေလှမ်းစတင်လိုသူများအတွက် မဖြစ်မနေသိသင့်သော ကွန်ပျူတာ Knowledge များကို ပညာဒါနအနေဖြင့် မျှဝေသင်ကြားပေးနေသော သင်တန်းဖြစ်ပါသည်။ သင်တန်းလိပ်စာ -တိုက် (၁)၊ အခန်း (C2)၊ မဟာမြိုင် ဦးဝိစာရလမ်း ဆိုဒ်ရှေ့မှတ်တိုင်အနီး၊ မြောက်ဒဂုံ၊ ရန်ကုန်၊ ဖုန်း ၀၉-၇၆၈၁၃၃၈၁၁ edu@ygnnet.com https://edu.ygnnet.com Source: YGN Net
ဒီဇင်ဘာလ၁ရက်နေ့ရန်ကုန်မြို့နှင့်မန္တလေးမြို့တွင် ကျင်းပပြုလုပ်မည့် ဂျပန်ဘာသာအရည်အချင်းစစ်စာ မေးပွဲအတွက် လျှောက်လွှာများကို အောက်ပါအစီအစဉ်အတိုင်းလက်ခံသွားပါမည်။ **စာမေးပွဲကျင်းပမည့်ရက်** ၂၀၁၉ခုနှစ်၊ဒီဇင်ဘာလ (၁) ရက် (တနင်္ဂနွေနေ့) **စာမေးပွဲကျင်းပမည့်နေရာ** ရန်ကုန်မြို့နှင့်မန္တလေးမြို့ **လျှောက်လွှာအရောင်းကာလ (ရန်ကုန်)** ၁၅.၈.၂၀၁၉ (ကြာသပတေးနေ့) မှ*** လျှောက်လွှာကုန်သည်အထိ*** လျှောက်လွှာလက်ခံကာလ (ရန်ကုန်) Level N5 - ၂၂.၈.၂၀၁၉ (ကြာသပတေးနေ့) မှ၂၈.၈.၂၀၁၉ (ဗုဒ္ဓဟူးနေ့) Level N4 - ၂၉.၈.၂၀၁၉(ကြာသပတေးနေ့)မှ၃.၉.၂၀၁၉ (အင်္ဂါနေ့) Level N1, N2, N3 - ၄.၉.၂၀၁၉ (ဗုဒ္ဓဟူးနေ့) မှ၈.၉.၂၀၁၉ (တနင်္ဂနွေနေ့) Test Voucher (စာမေးပွဲဖြေဆိုခွင့်ကဒ်ပြား)ထုတ်ပေးမည့်ကာလ (ရန်ကုန်) ၁၅.၉.၂၀၁၉(တနင်္ဂနွေနေ့)မှ၎.၁၀.၂၀၁၉ (သောကြာနေ့) အချိန် - မနက်၉း၃၀နာရီမှညနေ၄း၀၀နာရီအထိ နေရာ - MAJA Education Centre အမှတ်၆၆/A၊သူရလမ်း၊တောင်ဥက္ကလာပမြို့နယ်၊ရန်ကုန်။(ပုဏ္ဏမီမှတ်တိုင်) ဖုန်း - 09 962751373, 09 262602121 **လျှောက်လွှာအရောင်းကာလ (မန္တလေး)** ၂၆.၈.၂၀၁၉ (တနင်္လာနေ့) မှ လျှောက်လွှာကုန်သည်အထိ **လျှောက်လွှာလက်ခံခြင်းနှင့်စာမေးပွဲဖြေဆိုခွင့်ကဒ်ပြားထုတ်ပေးမည့်ကာလ (မန္တလေး)** ၁.၉.၂၀၁၉(တနင်္ဂနွေနေ့) မှ၅.၉.၂၀၁၉ (ကြာသပတေးနေ့) အချိန် - မနက်၉း၃၀နာရီမှညနေ၄း၀၀နာရီအထိ (နေ့လည်၁၂နာရီမှ၁နာရီအထိထမင်းစားနားပါမည်။) နေရာ - MAJA (Mandalay Branch) 1st Floor, Water Street, Block-1, Unit 6, Mingalar Mandalay, Chan Mya Thar Si Township, Mandalay. ဖုန်း - 09 255162533 **လျှောက်လွှာကြေး - တစ်စောင် = 1000 Ks **စာမေးပွဲကြေး - N 1, N2, N3- 25000 Ks, N4, N5 - 20000 Ks **လျှောက်လွှာများကို** ၁။လူကိုယ်တိုင်လာရောက်လျှောက်ထားခြင်း... အထက်ဖော်ပြပါနေရာများတွင်လျှောက်လွှာတစ်စောင် (၁၀၀၀ကျပ်) ဖြင့်ရယူပြီးလိုအပ်သည့်အချက်အလက်များပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်း၍မှတ်ပုံတင်မိတ္တူနှင့်အတူလူကိုယ်တိုင်လာရောက်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ မှတ်ချက်။။ကျောင်းမှတာဝန်ခံ၍မိမိကျောင်းသားများအတွက်စုစည်းပြီးလာရောက်လျှောက်ထားပါကဖြေဆိုမည့်ကျောင်းသား/သူများ၏အမည်၊မွေးသက္ကရာဇ်တို့ကိုစာရင်းပြုစုထားသောစာရွက်နှင့်အတူမှတ်ပုံတင်မိတ္တူပါပူးတွဲတင်ပေးရပါမည်။ ၂။ E-mail ဖြင့်လျှောက်ထားခြင်း... (က) လျှောက်လွှာများကိုဂျပန်ဖောင်ဒေးရှင်း (ရန်ကုန်) Website Link https://yg.jpf.go.jp/…/2019-december-japanese-langu…/မှအခမဲ့ Download ရယူပြီး Computer ဖြင့်လိုအပ်သည့်အချက်အလက်များဖြည့်သွင်းပြီးလျှောက်လွှာနှင့်မှတ်ပုံတင်မိတ္တူကိုရန်ကုန်တွင်ဖြေဆိုမည့်သူများသည်jlptmyn.ygn@gmail.comသို့လည်းကောင်း၊မန္တလေးတွင်ဖြေဆိုမည့်သူများသည်jlptmyn.mandalay@gmail.comသို့လည်းကောင်းAttachmentတွဲပြီးပေးပို့လျှောက်ထားပါ။ လျှောက်လွှာလက်ခံရရှိသည့်အကြောင်းကြားစာရပြီးလျှင်အထက်ဖော်ပြပါလျှောက်လွှာလက်ခံသည့်နေရာများသို့လျှောက်လွှာလက်ခံကာလအတွင်းစာမေးပွဲကြေးပေးသွင်းပြီးလျှောက်ထားပါ။(စာမေးပွဲကြေးကိုအထက်ပါလျှောက်လွှာလက်ခံမည့်နေရာများတွင်ပေးသွင်းပြီးမှသာခုံနံပါတ်ရရှိမည်ဖြစ်ပါသည်။) (ခ) လျှောက်ထားပြီး၂၄နာရီအတွင်း Reply မရပါကတိုက်ရိုက်ဖုန်းဆက်ပြီးဆက်သွယ်ပါ။ ၃။ရန်ကုန်မြို့တွင်လျှောက်ထားသောသူများအနေဖြင့်စာမေးပွဲဖြေဆိုခွင့်ကဒ်ပြားများကိုအထက်ဖော်ပြပါသတ်မှတ်ရက်အတွင်းသာပြန်လည်ထုတ်ယူရပါမည်။ ၄။မန္တလေးမြို့တွင်လျှောက်ထားသောသူများအနေဖြင့်စာမေးပွဲဖြေဆိုခွင့်ကဒ်ပြားများကိုလျှောက်လွှာလက်ခံကာလအတွင်းတစ်ပါတည်းပြန်လည်ထုတ်ယူနိုင်ပါမည်။ **အထူးသတိပြုရန်** မှတ်ပုံတင်ပျောက်ဆုံးသူများ၊လက်ဝယ်မရှိသူများအနေဖြင့်အောက်ဖော်ပြပါကဒ်ပြားများဖြင့်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ယင်းကဒ်ပြားများမှလွှဲ၍ကျန်အခြားမည်သည့်ကဒ်ပြားနှင့်မှလျှောက်ထား၍မရနိုင်ပါ။ ၁။ယဉ်မောင်းလိုင်စင် ၂။နိုင်ငံကူးလက်မှတ် ၃။ကျောင်းသားကဒ် (အစိုးရမူလတန်း၊အလယ်တန်း၊အထက်တန်းကျောင်းများ) ၄။ကျောင်းသားကဒ် (အစိုးရတက္ကသိုလ်၊ကောလိပ်များ) ၅။မွေးစာရင်း (အသက်၁၀နှစ်အောက်လျှောက်ထားမည့်သူများ) Read More>>> Marketing Management သင်တန်း အသေးစိတ်သိရှိလိုသည်များကို MAJA Facebook၊The Japan Foundation Yangon Facebook နှင့်ဂျပန်သံရုံး Website များတွင်ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။ https://www.facebook.com/MyanmarAssociationOfJapanAlumniMA…/ https://www.facebook.com/JFYangon/ https://www.mm.emb-japan.go.jp/…/myan…/news/2018/new-60.html ဂျပန်ဘာသာအရည်အချင်းစစ်စာမေးပွဲနှင့်ပတ်သက်၍အသေးစိတ်သိရှိလိုပါက ဖုန်း - ၀၉၉၆၂၇၅၁၃၇၃သို့ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံဂျပန်ပြန်ပညာသင်ဟောင်းအသင်း (MAJA) ဂျပန်ဖောင်ဒေးရှင်း (ရန်ကုန်) Address No. 2B-4, Snow Garden Housing, Thu Mingalar Str, Hnin Si Gone (KA) Qtr, Thingangyum Tsp, Yangon, Myanmar. Contact 09428612151, 09262602121 Email address maja.ygn@gmail.com maja.ygn@ascoja-maja.org.mm Source: YJLS- Yangon Japanese Language School
Japan will be held in Yangon and Mandalay qualification exam
Marketing Management သင်တန်း
**ရန်ကုန်စီးပွားရေးတက္ကသိုလ် Myanmar-India Entrepreneurship Development Center **ဖွင့်လှစ်မည့်ရက်မှာ (၂၁-၈-၂၀၁၉) မှ (၃၀-၈-၂၀၁၉) (ရုံးဖွင့်ရက်ညနေပိုင်း (၈) ရက်သင်တန်း)ဖြစ်ပါသည်။ **သင်တန်းကြေးမှာ ကျပ်ငါးသောင်းတိတိ ဖြစ်ပါသည်။ **သင်တန်းချိန်မှာ ညနေ (၅း၃၀) မှ (၇း၃၀) အထိဖြစ်ပါသည်။ **သင်တန်းစုံစမ်းရန်အတွက် ပါရမီလမ်း၊ ရန်ကုန်စီးပွားရေးတက္ကသိုလ်(လှိုင်နယ်မြေ) ဖုန်းနံပါတ် ၀၁-၆၆၄၆၈၄၊ ၀၉-၉၆၃၃၅၉၄၅၉ ဖြစ်ပါသည်။ **ရန်ကုန်စီးပွားရေးတက္ကသိုလ်မှ တိုက်ရိုက်ပေးအပ်သည့် သင်တန်းဆင်းလက်မှတ်ရရှိပါမည်။** Read More>>>> တက္ကသိုလ်ဝင်စာမေးပွဲ ဖြေဆိုခွင့် လျှောက်လွှာများ သြဂုတ်လကုန်တင်ရမည် **သင်တန်းကိုစတင်အပ်နှံနိုင်ပြီး ဖြစ်၍ ရုံးချိန်အတွင်းလာရောက်အပ်နှံရန်တိုက်တွန်းလိုပါသည်။သင်တန်းအပ်နှံရန်အတွက် Passport Size ဓာတ်ပုံ (၂) ပုံယူလာပေးရန်လိုအပ်ပါသည်။ Source: Myanmar-India Entrepreneurship Development Center-MIEDC
Marketing course is open
19/B, San Yeik Nyein 2nd St., Hledan,Kamayut,Yangon Region
B.K (6/7/8), Banyar Nwet St, Ward (2),Hmaw Bi,Yangon Region
2/Kha, Aung Yadanar St., Boho Rd, Kanlay Su, Aung Yadanar Wood...